Antoko HVM : Mangataka ny filatsahan’ i Hery Rajaonarimampianina -
AccueilRaharaham-pirenenaAntoko HVM : Mangataka ny filatsahan’ i Hery Rajaonarimampianina
Taorian’i Fianarantsoa sy Toliara, dia Mahajanga indray no nanatanteraka ny zaikabe fahatelon’ny Antoko HVM. Fotoana iray izay nahafahan’ireo mpikambana eo anivon’ny birao nasionaly indray ny tahaka izao, mba nifanakalozana amin’ ireo mpikambana eny ifotony, amin’ny fametrahana ny fanarahana ny drafitra napetraky ny filoha mpanorina, dia ny filoham-pirenena ankehitriny izany, indrindra amin’ny mety ho filatsahany hofidiana ihany koa amin’ny fifidianana izay ho avy. Nandritra izany ihany koa no niantsoan’ny filohan’ny antoko HVM, Rivo Rakotovao, ireo mpikambana hanohana ny filoham-pirenena amin’ ny asa izay hotanterahiny sy ny faniriany. Raha tsiahivina dia nandritra io andro io ihany no nihaonan’ny filoham-pirenena tamin’ny vahoakan’ i Mahajanga, sy ny solontena ifotony sy ireo solontenam-bahoaka toa ny solombavambahoaka sy ireo senatera nifampiresahana amin’ny lafin’ny fampandrosoana ny firenena. Nambaran’ny filoha tamin’ ireo fifanatrehana ireo fa raha toa mbola omen’ny vahoaka fotoana ny tenany, dia miroso sy hitombo hatrany ny fampandrosoana.
Ho an’ireo mpikambana eo anivon’ny antoko HVM dia ilaina hatrany noho izany ny fahazoana fe-potoam-piasana manaraka eo amin’ny fitantanana ny firenena, ahafahana manatanteraka ireo voalazan’ny filoham-pirenena ireo. Noho izany, nandritra ny kabary izay nataony no nanambaran’i Rivo Rakotovao ny amin’ny tokony hanohanana ny filoham-pirenena ankehitriny ahatongavana amin’izay hetahetany, amin’ny mbola hisian’ny fampandrosoana izay. Nandritra ity zaikabe ity ihany koa moa no nanamafisana ny birao nasionalin’ ny antoko HVM,